नेपाली मुलका डा. जगन्नाथ शर्मा दुई तिहाई मतसहित बेलायतमा मेयरमा निर्वाचित - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडाैँ । नेपाली मुलका डा. जगन्नाथ शर्मा बेलायतको कोलबर्न टाउन काउन्सिलको मेयरमा निर्वाचित भएका छन । पर्वतको बिहादीमा जन्मिएका एक गैरआवासीय नेपाली वेलायतमा मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन । बेलायतको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय डा. शर्मा नर्थ योर्कशायरको कोलबर्न टाउन काउन्सिलको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । शर्मा दुई तिहाई मत प्राप्त गर्दै सोमवार भएको स्थानीय काउन्सिलरहरु बीच निर्वाचनमा निर्वाचित हुन सफल भएका हुन ।
शर्मा यसअघि सो क्षेत्रमा तीन पटकसम्म काउन्सिलर र उपमेयरमा समेत निर्वाचित भएका थिए। मेयर पदमा निर्वाचित भए पछि शर्माले आफ्नो क्षेत्रमा नेपाली समुदाय र बेलायतीबीच रहेर पुलको रुपमा काम गर्ने बताएका छन । शर्माले आफ्नो क्षेत्रमा हाउजीङ, बेरोजगार लगायतको समस्या रहेको बताउँदै आगामी दिनमा समुदायतको आकांक्षा पुरा गर्न तल्लिन रहने बताए।
शर्माले नेपाल र बेलायतबीचको सम्वन्धलाई जनस्तरमा लैजान समेत पहल गर्ने बताए। उक्त पदमा पुग्न सफल भए। शर्माले स्थानीय आर्मी मेडिकल अस्पतालमा स्पोर्टस् डाक्टरको रुपमा हेड अफ डिपार्टमेन्टको जिम्मेवारी समेत समाल्दै आएका छन्।
नेपाल बास्केटबल सङ्घले त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कभर्ड हलमा आयोजना हुने पहिलो […]
कुशे अाैंशी र कुशको धार्मीक तथा वैज्ञानिक महत्व
भदाै ५, काठमाडाैँ । स्नाने दाने जपे होमे स्वध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भौ कुर्वीत तथा सन्ध्याभिवादने […]
भक्तपुरका भूकम्पपीडितलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ: अध्यक्ष दाहाल
जेठ १४ ।काठमाडौँ, एकीकृत नेकपा ९माओवादी०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले भक्तपुरका भूकम्प पीडितलाई उचित […]
मक्कामा हज गर्न गएका ७८ जना इस्लाम धर्मावलम्बीको मृत्यु
भदौ २५,एजेन्सी । हजका लागि साउदी अरवस्थित मक्का शहरमा गएका इजिप्टका ७८ जना इस्लाम धर्मावलम्बीको मृत्यु भएको […]
एक्सनमा सर्वेन्द्र खनाल, चक्रपथ वरपरका घरटहरा हटाउने कार्य शुरु
भदौ १७, काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चक्रपथ किनारामा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका पसल हटाउने […]
काठमाडौं । वर्षाका बेला कतै हिँडडुल गर्नु छ भने ११५५ टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । जहाँबाट वर्षा बढी […]